Tigsiiga Wasaarada Calmaniyadda Ugu Wacan: – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Qorraalo • Rashad Osmail
Tigsiiga Wasaarada Calmaniyadda Ugu Wacan:
Waa qalinka: Khalid Xassan Yusuf
Afaanka carabiga ka soo roge waa: Rashaad Osman.
Khadiiga Bin Qanah oo ka war wareegaysa amaanta calmaniyadda
Khadiija Bin Qanah (wariyad Al-jaziira u shaqeysa) waxay ka laba labeyneysaa aaminsta calmaaniyada.
Khadiijo waxay bogeeda facebook-ka ku qor tay hadalkaan soo socdo ” Ahmed Hussein wuxuu dalkiisa ka qaxay isagoo lix iyo toban jir ah, wuxuuna qaxootinimo ugu nooladay Kanada ka hor inta uusan noqon Wasiir-keeda Socdaalka iyo soogalootiga”.
Ka warama bal hadii uu ninkaa uu u qixi lahaa dal ka mid ah dalalka carabta.!!?
Kanada hadii aysan ahaan leheen dowlad Calmaaniyad ku dhisan, maanta Ahmed Hussein iyo soo galootiga asaagiisa ahi ma yeesheen xuquuqda ay maanta leeyihiin, mana gaareen meesha uu maanta gaaray, ee ah inuu xil Wasiirnimo ka qabtoo dalkaas.
Dowladaha ku dhisan reernimada iyo diinta waxayna u ogoladeen soogalootiga xuquuq intaas ka hooseeso, maxaad u maleynee marka xuquuqda siyaasadeed. Kaliya dowlada ku dhisan Calmaaniyadda mooyee dowlad kale sidaa masameen karto Calmaaniyaddu waxay uu dhigatahay tahay Muwaadinimo, se diin wax shaqo ah kuma laha.
Hadaba maxaa u diiday dowladaha reernimada iyo diinta ku dhisan inay qaataan Calmaaniyadda, si dadkooda takoor-ka diinta iyo reernimada ku dhisan uga bad baadan.
Ahmed Husein se, si uu u sii ahaado muwaadin wanaagsan, wado kale uma banaana aan ka eheen Calmaaniyadda.!!!!
Diintu ma cilmi baa mise waa khiyaal (dhalanteed)?